“စာရင်းရှိမယား (၃၃)ယောက် ရှိတဲ့ မုံရွာ သာစည်နယ်က သူဌေးကြီး ဦးဖိုးရှိ အကြောင်း” | CeleTrend
ဒီပြတင်းပေါက်တွေကနေ နေ့တိုင်း ဦးဖိုးရှိပစ်ချမဲ့ခေါင်းအုံးကို မယား အယောက် ၃၀ က စောင့်ဖမ်းကြသတဲ့စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာ သာစည်နယ်မှာ ဦးဘိုးရှိဆို ခုထိ သိနေကြတုန်း နာမည်ကြီးနေတုန်း … စံပြ ပြောဆိုနေရတုန်း အဘယ်သို့ကြောင့်ဆိုတော် ဦးဘိုးရှိတွင် စားရင်းရှိ မယား ၃၃ ယောက်ရှိသည် ဦးဘိုးရှိက လယ် ဧက သောင်းချီ ပိုင်တယ်ဆိုပဲ ..တနှစ်တနှစ် သီးစားချသည်ရော .. လယ်စာရင်းငှါးများ ရာသီသီနှံပေါ်ချိန်ဆို မိသားစုလိုက် လာကန်တော့ကြရသည် ..ထိုအချိန် တွင် သမီးပျို ချောချောမောမော ပါလာပါက.. ဦးဘိုးရှိ သဘောကျလို့ ထားခဲ့ဆိုလျင် ထားခဲ့ပေပဲ… မထားခဲ့လို့ကတော့ နောက်နှစ်သူ့လယ်မှာ အလုပ်မရဘူးသာမှတ် အဲ့လို
ဒီလိုနဲ့ သူကြိုက်ရာ ယူထားတာ စာရင်းရှိကြီး ၃၃ေ ယာက် ကြုံဒိုးလေးတွေက ပါသေးဆိုဘဲ …ဦးဘိုးရှိက ၃ ထပ်တိုက်နဲ့နေတာ .. တိုက်အောက်ဆုံးထပ်မှာ ဇာတ်စင် ကြီးဆောက်ထားသတဲ့ဇာတ်ခေါ် က ရင် ‘ သုရောနန္ဒီ ဇာတ် ‘ ဘဲ ကခိုင်း သတဲ့ . ဘာလို့တုန်း ဆိုတော့အဲ့ဇာတ်က မင်းသမီးကို ဂဠုန် ချီတဲ့အခန်းပါ ဆိုဘဲ။အဲ့အခန်းရောက်ရင် ဦးဘိုးရှိက ဂဠုန် ခေါင်းဆောင်း ကြီး စွပ်ပီး သူကိုယ်တိုင် မင်းသမီး ကို ပွေ့ချီပီး သုတ်လေ့ရှိသတဲ့ …. ဦးဘိုးရှိက အဲ့ဂဠုန်ခေါင်းဆောင်းကို အပိုင်ဝယ်ထားတာ… ဇာတ်ကြည့်ရင် ဘေးနားအဲ့ ခေါင်းဆောင်းထားကြည့်ရော … မင်းသမီးကို ဂဠုန် သုတ်ပြေးတဲ့အခန်းကလည်း … ဂဠုန်က အသုတ် ဇာတ်စင် မီးတွေကမှိတ် ပေး .. စင် ကိုအမှောင်ချအဲ့လို ကွက်တိဖြစ်ရတာ…
ပီးရင် ဦးဘိုးရှိက မင်းသမီးကို အခန်းထဲ ခေါ်ပြေးရော သူနဲ့ အဆင်ပြေသွားရင် အဲ့ည ဇာတ် ဆက်ကစရာ မလို တော့ဘူး ပြီးဘီ …. အဲ့ မင်းသမီးက ငြင်းဆန်နေရင်တော့ ဇာတ်ဆက်ကရတယ် .. နောက်လဲမငှါးတော့ဘူး အဲ့လို ပြတ်သားတာ ဦးဘိုးရှိက တခါ က ညောင်ကန် မင်းသမီး ဇာတ်လာကတယ် မင်းသမီးကငယ်လဲ ငယ် ချောကလဲချော ဆိုတော့ ဦးဘိုးရှိ မနေနိုင်ဘူး …. ဂဠုန်ခေါင်းဆောင်းဘေးချပီး သူ့ဇာတ်ဖြစ်တဲ့ သုရောနန္ဒီ ကခိုင်း… မင်းသမီး ဂဠုန်ချီတဲ့အခန်းလဲရောက်ကော .. ဘာပြောကောင်းမတုန်း မင်းသမီးချီပီး သူ့အခန်းထဲဝင်ပြေးပါရော…
မင်းသမီး က လုံးဝ သဘောမတူဘဲ ပြဿနာ တက်ပီး မင်းသမီး ချက်ချင်း ပြန်ပါလေရောလား … ဦးဘိုးရှိလဲ ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်နဲ့ကျန်ခဲ့တာ…..တပတ်လောက် ဦးဘိုးရှိ အသဲကွဲနေတော့ တငူငူ တငိုင်ငိုင် …. ဒါနဲ့ ဦးဘိုးရှိမယားတွေလဲ မနေနိုင် အချင်းချင်းတိုင်ပင်ပီး မယားကြီးနဲ့ အခြားမယား၅ ယောက်တို့ ညောင်ကန်ရွာ လိုက်ပီး မင်းသမီးကိုဖျောင်းဖျကြတာ ၂ ရက်ကြာသတဲ့ … နောက်တော့ မင်းသမီးလဲ လိုက်လာပေးသတဲ့ ဗျာ…. ဦးဘိုးရှိက အဲ့လို ပိုင်တာ….ဒီတော့ ဒီနယ်တဝိုက် ဦးဘိုးရှိ ဆိုရင် ယောက်ကျား သားတွေရဲ့ အိုင်ဒေါ ဖြစ် ကရောပေါ့ …. ကိုယ်လည်း ကြားကြားချင်း ဦးဘိုးရှိကို ကြည်ညို လိုက်တာဆိုတာ .. သူ့အိမ်ကြီးသွားကြည့်ရတဲ့အထိပါပဲ ကဲ မုံရွာသားတွေ သာစည် သားတွေ ဂုဏ်ယူရ တဲ့ ဦးဘိုးရှိ ဆိုတာ ဒါဘဲကလား…
ဒီပွတငျးပေါကျတှကေနေ နတေို့ငျး ဦးဖိုးရှိပဈခမြဲ့ခေါငျးအုံးကို မယား အယောကျ ၃၀ က စောငျ့ဖမျးကွသတဲ့စဈကိုငျးတိုငျး မုံရှာ သာစညျနယျမှာ ဦးဘိုးရှိဆို ခုထိ သိနကွေတုနျး နာမညျကွီးနတေုနျး … စံပွ ပွောဆိုနရေတုနျး အဘယျသို့ကွောငျ့ဆိုတျော ဦးဘိုးရှိတှငျ စားရငျးရှိ မယား ၃၃ ယောကျရှိသညျ ဦးဘိုးရှိက လယျ ဧက သောငျးခြီ ပိုငျတယျဆိုပဲ ..တနှဈတနှဈ သီးစားခသြညျရော .. လယျစာရငျးငှါးမြား ရာသီသီနှံပျေါခြိနျဆို မိသားစုလိုကျ လာကနျတော့ကွရသညျ ..ထိုအခြိနျ တှငျ သမီးပြို ခြောခြောမောမော ပါလာပါက.. ဦးဘိုးရှိ သဘောကလြို့ ထားခဲ့ဆိုလငျြ ထားခဲ့ပပေဲ… မထားခဲ့လို့ကတော့ နောကျနှဈသူ့လယျမှာ အလုပျမရဘူးသာမှတျ အဲ့လို
ဒီလိုနဲ့ သူကွိုကျရာ ယူထားတာ စာရငျးရှိကွီး ၃၃ေ ယာကျ ကွုံဒိုးလေးတှကေ ပါသေးဆိုဘဲ …ဦးဘိုးရှိက ၃ ထပျတိုကျနဲ့နတော .. တိုကျအောကျဆုံးထပျမှာ ဇာတျစငျ ကွီးဆောကျထားသတဲ့ဇာတျချေါ က ရငျ ‘ သုရောနန်ဒီ ဇာတျ ‘ ဘဲ ကခိုငျး သတဲ့ . ဘာလို့တုနျး ဆိုတော့အဲ့ဇာတျက မငျးသမီးကို ဂဠုနျ ခြီတဲ့အခနျးပါ ဆိုဘဲ။အဲ့အခနျးရောကျရငျ ဦးဘိုးရှိက ဂဠုနျ ခေါငျးဆောငျး ကွီး စှပျပီး သူကိုယျတိုငျ မငျးသမီး ကို ပှခြေီ့ပီး သုတျလရှေိ့သတဲ့ …. ဦးဘိုးရှိက အဲ့ဂဠုနျခေါငျးဆောငျးကို အပိုငျဝယျထားတာ… ဇာတျကွညျ့ရငျ ဘေးနားအဲ့ ခေါငျးဆောငျးထားကွညျ့ရော … မငျးသမီးကို ဂဠုနျ သုတျပွေးတဲ့အခနျးကလညျး … ဂဠုနျက အသုတျ ဇာတျစငျ မီးတှကေမှိတျ ပေး .. စငျ ကိုအမှောငျခအြဲ့လို ကှကျတိဖွဈရတာ…
ပီးရငျ ဦးဘိုးရှိက မငျးသမီးကို အခနျးထဲ ချေါပွေးရော သူနဲ့ အဆငျပွသှေားရငျ အဲ့ည ဇာတျ ဆကျကစရာ မလို တော့ဘူး ပွီးဘီ …. အဲ့ မငျးသမီးက ငွငျးဆနျနရေငျတော့ ဇာတျဆကျကရတယျ .. နောကျလဲမငှါးတော့ဘူး အဲ့လို ပွတျသားတာ ဦးဘိုးရှိက တခါ က ညောငျကနျ မငျးသမီး ဇာတျလာကတယျ မငျးသမီးကငယျလဲ ငယျ ခြောကလဲခြော ဆိုတော့ ဦးဘိုးရှိ မနနေိုငျဘူး …. ဂဠုနျခေါငျးဆောငျးဘေးခပြီး သူ့ဇာတျဖွဈတဲ့ သုရောနန်ဒီ ကခိုငျး… မငျးသမီး ဂဠုနျခြီတဲ့အခနျးလဲရောကျကော .. ဘာပွောကောငျးမတုနျး မငျးသမီးခြီပီး သူ့အခနျးထဲဝငျပွေးပါရော…
မငျးသမီး က လုံးဝ သဘောမတူဘဲ ပွဿနာ တကျပီး မငျးသမီး ခကျြခငျြး ပွနျပါလရေောလား … ဦးဘိုးရှိလဲ ဆနျ့ငငျ ဆနျ့ငငျနဲ့ကနျြခဲ့တာ…..တပတျလောကျ ဦးဘိုးရှိ အသဲကှဲနတေော့ တငူငူ တငိုငျငိုငျ …. ဒါနဲ့ ဦးဘိုးရှိမယားတှလေဲ မနနေိုငျ အခငျြးခငျြးတိုငျပငျပီး မယားကွီးနဲ့ အခွားမယား၅ ယောကျတို့ ညောငျကနျရှာ လိုကျပီး မငျးသမီးကိုဖြောငျးဖကြွတာ ၂ ရကျကွာသတဲ့ … နောကျတော့ မငျးသမီးလဲ လိုကျလာပေးသတဲ့ ဗြာ…. ဦးဘိုးရှိက အဲ့လို ပိုငျတာ….ဒီတော့ ဒီနယျတဝိုကျ ဦးဘိုးရှိ ဆိုရငျ ယောကျကြား သားတှရေဲ့ အိုငျဒေါ ဖွဈ ကရောပေါ့ …. ကိုယျလညျး ကွားကွားခငျြး ဦးဘိုးရှိကို ကွညျညို လိုကျတာဆိုတာ .. သူ့အိမျကွီးသှားကွညျ့ရတဲ့အထိပါပဲ ကဲ မုံရှာသားတှေ သာစညျ သားတှေ ဂုဏျယူရ တဲ့ ဦးဘိုးရှိ ဆိုတာ ဒါဘဲကလား…